musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Doha kuenda Almaty ndege paQatar Airways izvozvi
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Kazakhstan Breaking News • nhau • vanhu • Qatar Kuputsa Nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau
Kazakhstan iparadhiso inofarira, ine nzvimbo dzakasiyana kubva kumakomo akafukidzwa nesinou kusvika kumarenje akapamhama, mabwe ane matombo, masango eeconiferous, uye deltas dzenzizi dzisina kubatwa. Vashanyi vanogona zvakare kuyemura mamaki enhoroondo anosanganisira yakajeka-yero shongwe dzeakakurumbira Zenkov Cathedral muAlmaty.
Basa idzva rinosimbisa hukama hwehukama pakati peHurumende yeQatar neRepublic of Kazakhstan.
Sevhisi nyowani ichaita kuti vanofamba vafambe vachienda nekudzoka kubva kuAlmaty kuti vanakidzwe nekusabatana kune dzimwe nzvimbo dzinopfuura 140.
Qatar Airways inofara kuzivisa kuti ichatanga mabasa akarongwa evafambi kuenda Almaty, Kazakhstan kutanga kubva muna 19 Mbudzi 2021. Basa idzva iri richashandiswa nendege yeAirbus A320, iine zvigaro gumi nezviviri muBusiness Class uye zvigaro 12 muEconomy Class.
Iyi sevhisi inogonesa vafambi vanobhururuka kuenda nekubva Almaty, Khazakisitani kunakidzwa nekubatana zvisina musono kunzvimbo dzinopfuura zana nemakumi mana, kuburikidza neWorld Best Airport, Hamad International Airport muDoha, iyo State yeKatar.
Qatar Airways Mutungamiri Mukuru weGroup, Anokudzwa VaAkbar Al Baker, vakati: “Tinodada kuunza mabasa edu ekuhwina mibairo ku Khazakisitani, tichiwedzera ino yakasarudzika yekuenda kunetiweki yedu iri kukura. "Basa idzva iri rinosimbisa hukama hwehukama pakati peHurumende yeQatar neRepublic of Kazakhstan, uye rinosimbisa kuzvipira kwedu kuenderera mberi nekusimudzira kutengeserana nekushanya pakati penyika mbiri huru."
Khazakisitani ndiyo simba rezvehupfumi reCentral Asia dunhu. Iyo paradhiso yekushanya, ine nzvimbo dzakasiyana siyana kubva kumakomo ane sinou akafukidzwa kuenda kune akapararira magwenga, matombo emakoroni, masango eeconiferous, uye asina kumbobatwa rwizi deltas. Vashanyi vanogona zvakare kuyemura mamaki enhoroondo anosanganisira yakajeka-yero shongwe dzeakakurumbira Zenkov Cathedral muAlmaty.
Ndege Chirongwa kuenda Almaty kubva 19 Mbudzi 2021:
Chishanu neMuvhuro (nguva dzese dzemuno)
Doha (DOH) kuenda Almaty (ALA) QR 391 inoenda: 01:15 inosvika: 08:35
Almaty (ALA) kuenda Doha (DOH) QR 392 inoenda: 21:40 inosvika: 23:55
Mutakuri wenyika yeHurumende yeQatar anoenderera mberi nekuvaka netiweki, iyo parizvino yakamira panzvimbo dzinopfuura zana nemakumi mana. Qatar Airways zvakare inoratidzira inochinja-chinja marongero emitemo ayo anopa shanduko dzisingagumi mumazuva ekufamba nenzvimbo, nenzvimbo dzisingabhadharwe dzetikiti dzese dzakapihwa mafambiro akapedzwa na31 Chivabvu 2022.